VPS होस्टिंग: यो के छ, आवश्यक छ, पेशेवर र विपक्ष - नेटवर्क र इन्टरनेट - 2019
मुख्य नेटवर्क र इन्टरनेट
कुन VPS होस्टिङ हो र कसरी एक विश्वसनीय प्रदाता छनौट गर्ने
होस्टिङ सेवा छनोट गर्नु वेबसाइटको सिर्जना गर्ने पहिलो चरणहरूमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरणहरू मध्ये एक हो। शुरुआती वेबमास्टरहरू प्रायः कम लागतको प्रस्तावमा रुचि राख्छन्, किनभने तिनीहरूको बजेट सीमित छ। तिनीहरू एक होस्ट छनौट गर्न चाहन्छन् जुन अप्रयुक्त प्रयोगका लागि आवश्यक ओभरपेङका अवसरहरू मात्र प्रदान गर्दछ। त्यसैले, कम उपस्थितिको साथ जवान साइटको लागि, तिनीहरू सामान्यतया सस्तो भर्चुअल (साझेदारी) होस्ट छनौट गर्छन्।
मूल्य एक सीमित बजेटको साथ एक महत्त्वपूर्ण फायदा हो, तर त्यहाँ धेरै ह्याण्डेभहरू छन् जुन अनिवार्य रूपमा होस्ट नियमित रूपमा। यदि उपस्थिति तीव्र रूपमा बढ्छ, वा उच्च चोटी भारको साथमा एकै प्रोजेक्ट एउटै सर्भरमा अवस्थित छ भने यो साइटको काममा अवरोध हुन सक्छ। व्यापारिक परियोजनाहरूको लागि, यो प्रारम्भिक चरणमा पनि अस्वीकार्य छैन, त्यसैले यो राम्रो तुरुन्तै VPS होस्टिंग छान्नुहोस्, जुन तुलनात्मक मूल्यमा ग्यारेन्टी गरिएका स्रोतहरू प्रदान गर्दछ। होस्टिंग कम्पनी Adminvps VPS होस्टिंग र अरू बीचको फरक फरक फरक वर्णन।
VPS के हो?
VPS होस्टिंगको फाइदाहरू र हानि
तपाईलाई कुन परियोजनाहरु चाहिन्छ?
VPS मा साइटहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने
कसरी छनौट गर्ने?
एक आभासी सर्भर वा VPS एक भौतिक सर्भरको सफ्टवेयर एनिमेटेड हो। यसको आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम हो, यसको सेटिङ्स र सफ्टवेयरको आफ्नै सेट। प्रयोगकर्ताको लागि, VPS होस्टिंगले "लोहा" सर्भरको रूपमा देख्छ र समान क्षमताहरू प्रदान गर्दछ। यद्यपि, केही हार्डवेयर स्रोतहरू साझा गरिन्छ, किनकि धेरै भर्चुअल सर्भर सामान्यतया एउटै भौतिक सर्भरमा चलिरहेको छ।
VPS / VDS प्रशासक पूर्ण रूट पहुँच छ र कुनै पनि आदेश कार्यान्वयन गर्न सक्छ, आवश्यक प्रोग्राम स्थापना गर्नुहोस् वा कन्फिगुरेसन परिवर्तन गर्नुहोस्। एकै समयमा, यो सधै यसको निपटानमा प्रदायक, प्रोसेसर कोर, डिस्क स्पेस द्वारा आवंटित स्मृति को मात्रा र साथ केहि निश्चित चौडाइ को इन्टरनेट च्यानल। यसैले, VPS होस्टिङ प्रयोगकर्ताले नियमित भौतिक सर्भरको रूपमा नियन्त्रण, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको समान स्तरको साथमा प्रदान गर्दछ। एकै समयमा, मूल्यमा धेरै सस्ता छ (यद्यपि यो नियमित होस्ट भन्दा बढी महंगा हुन्छ)।
भर्चुअल सर्भरले प्रयोगकर्तालाई साझा-होस्टिङ र एक भौतिक समर्पित सर्भरको बीचमा "मध्य जमीन" प्रदान गर्दछ। यसले उच्च र स्थिर प्रदर्शनलाई सस्ती मूल्यमा प्रदान गर्दछ। सामान्य होस्टिंग बाट मुख्य फरक "पड़ोसीहरू" को प्रभाव को अभाव हो। दिनको कुनै पनि समयमा VPS-होस्टिङले तपाईंको परियोजनाहरू कम्प्युटिंग स्रोतहरूको समान मात्रा प्रदान गर्दछ।
भर्चुअल होस्टिङ, VPS र समर्पित सर्भरको तुलनामा तपाईंले निम्न प्रविधिहरू र सहमतिहरूलाई हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ:
भर्चुअल होस्टिंग: एक होस्ट सर्भरमा धेरै फरक साइटहरू होस्ट गरिएका छन्।
प्रो: द्रुत सुरु, सजिलो अपरेसन, कम मूल्य;
cons: न्यूनतम नियन्त्रण, कम उत्पादकता, दिनको समय र छिमेकी परियोजनाहरूको कार्यभारमा निर्भर गर्दछ।
VPS होस्टिङ: सर्भरमा वस्तुतः खण्डहरूमा विभाजित हुन्छ र तपाइँको भाग तपाईंको परियोजनाहरूको लागि आवंटित गरिएको छ।
फाइदा: सुरक्षित वातावरण, जड पहुँच, कन्फिगरेसन लचीलापन, स्थिर प्रदर्शन;
कन्सस: साझा होस्टिंग को तुलना मा VDS केहि अधिक महंगा छ।
समर्पित: सम्पूर्ण सर्भर तपाईंको परियोजनाहरूमा समर्पित छ।
प्रो: अधिकतम स्तरको नियन्त्रण, सुरक्षा र प्रदर्शन
कश: धेरै उच्च मूल्य, अधिक जटिल र महंगा सेवा।
सानो ट्राफिकको साथ एक गैर-व्यावसायिक साइट नियमित रूपमा होस्टिंग नियमित रूपमा काम गर्न सक्छ। तर प्रदर्शन वृद्धि को रूप मा, उत्पादकता अपर्याप्त हुन्छ। पृष्ठहरू लामो समयसम्म, र कहिलेकाहिँ साइटले "ढिलो" हुन सक्छ - केहि मिनेटको लागि दुर्गम हुदैन। केहि अवस्थामा, तपाइँ होस्टबाट एक अधिसूचना प्राप्त गर्न सक्नु भएको छ कि परियोजनाले मासिक संसाधन सीमा पहिले नै विकसित गरेको छ। यस अवस्थामा, VPS-hosting मा संक्रमणले स्थिर प्रदर्शन र साइटको निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित गर्न उत्तम विकल्प हुनेछ।
VPS / VDS मा स्थित वेब-स्रोतहरू व्यवस्थापन गर्ने नियमित रूपमा होस्ट नियमित रूपमा। धेरै प्रदायकहरूले ग्राहकहरूलाई सबैभन्दा लोकप्रिय नियन्त्रण प्यानलहरू (ISPmanager, CPanel, Plesk र ​​अन्य) मध्ये एकसँग निःशुल्क प्रदान गर्छन्। केहि होस्टर्सहरूले पनि आफ्नै आफ्नै प्यानलहरू प्रस्ताव गर्छन्, जुन होस्टिङ र VDS दुवै को लागी उस्तै देखिन्छ।
RuNet मा सबैभन्दा लोकप्रिय प्यानल ISPmanager5लाइट हो। यस प्यानलसँग कुनै त्रुटिहरू बिना सक्षम शब्द-शब्दको साथ रूसी-भाषा इन्टरफेससँग छ (जुन प्रायः अन्य उत्पादनहरूमा पाइन्छ)। यसको सहयोगको साथ, तपाइँ एक भिडीयो मोडमा प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ जुन VPS व्यवस्थापन (प्रयोगकर्ताहरू, सम्पादन गर्ने वेबसाइटहरू, डेटाबेसहरू, इ-मेल र अन्य स्रोतहरू) सम्पादन गर्ने प्रक्रियामा आवश्यक सबै कार्यहरू।
VPS होस्टिंगमा स्विच गर्ने निर्णय मात्र आधा युद्ध हो। अब यो प्रदायक निर्धारण गर्न आवश्यक छ, किनकि यो बजार प्रस्तावहरू भरिएको छ, र यो सबै भन्दा रोचक छनौट गर्न सजिलो छैन। इष्टतम VDS ट्राफिक निर्धारण निर्धारण भर्चुअल होस्टिंग छनौट गर्नु भन्दा धेरै गाह्रो छ, किनकि तपाईंलाई खातामा थप नग्नताहरू लिन आवश्यक छ। मुख्य कारकहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ विचार गर्नुहोस्।
प्रशासन। सामान्य होस्टिंग एक साझा सर्भरमा अवस्थित छ, जुन प्रदायकका कर्मचारीहरु द्वारा व्यवस्थित गरिन्छ। VPS को प्रदर्शन स्वतन्त्र रूपमा निगरानी गरिनेछ, जुन सजिलो छैन। त्यसकारण, राम्रोसँग प्रशासनको साथ एक ट्राफ छान्नुहोस्। यस अवस्थामा, सर्भर एक प्रणाली प्रणाली प्रशासक द्वारा निगरानी गरिनेछ। प्रशासनसँग एक VPS होस्टिंग छनौट गर्दै, तपाइँ भर्चुअल सर्भरको सबै फाइदाहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ र तपाईंलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो सञ्चालन 24 घण्टाको निरीक्षण गर्न आवश्यक छैन।
अपरेटिङ सिस्टम अधिकांश होस्टर्सहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई सर्भर अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज सर्भर र धेरै लिनक्स वितरणको छनौट प्रदान गर्दछ। विन्डोजमा महत्त्वपूर्ण फायदाहरू छैनन्, तर कहिलेकाँही केहि निश्चित सफ्टवेयरको लागि आवश्यक छ (उदाहरणका लागि, ASP.NET)। यदि तपाइँ यस्तो सफ्टवेयर उत्पादनहरू प्रयोग गर्नुहुन्न भने, तपाईंको लागि उत्तम विकल्प लिनक्ससँग VDS हो (तपाइँले एक विशिष्ट वितरण किट आफ्नो स्वाद र अनुभवमा चयन गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि तिनीहरू सबै आवश्यक कार्यक्षमता प्रदान गर्न सक्छन्)।
सर्भर उपकरण। धेरै प्रदायकहरू VPS / VDS सेवाहरू प्रदान गर्ने कुनै द्रुत हुने छैनन् कि भर्चुअल मशीनहरू चलिरहेको भौतिक हार्डवेयरको बारेमा जानकारी साझेदारी गर्न। तर यो प्रश्न होस्टिङ वा भर्चुअल सर्भर छान्नु अघि सोध्नु लायक छ। यो केवल राम, सीपीयू कोर र हार्ड डिस्क स्पेसको मात्रा मात्र होइन, तर यो हार्डवेयरको कक्षा पनि जान्न महत्त्वपूर्ण छ। यो वांछनीय छ कि सर्भरहरू वर्तमान पीढी प्रोसेसरहरू स्थापित भए, छिटो DDR4 स्मृति र उच्च गति एसएसडी-ड्राइभहरू। एउटा प्रदायकले यो प्रविधि प्रयोग गरी निश्चित रूपमा तपाइँको सर्भरको कन्फिगरेसन वर्णन गर्न नराम्रो छ।
विश्वसनीयता विपरित अपरेशन र तपाईंको VPS को उपलब्धता सीधा डेटा केन्द्र को प्रदाता उपकरण स्थापित भएको छ को वर्ग मा निर्भर गर्दछ। एक महत्त्वपूर्ण सूचक पहुँच हो, जुन 99.8% (टाइयर II) वा 99.98% (तह III) को स्तरमा हुन सक्छ। यो फरक छ कि फरक देखिन्छ, तर पूर्वाधारको लागत धेरै अधिक छ, यसको मतलब यो हो कि सेवाहरू महत्त्वपूर्ण र अधिक महंगा छन्। विश्वसनीय साइट सञ्चालनको लागी यो डेटाबेसमा होस्टिंग VPS किराए मा सिफारिस गरिएको छ एक वर्ग संग टायर III भन्दा कम छैन।
आरक्षण उपकरण। रिजर्व स्रोतहरूले VDS को विश्वसनीयता र स्थिरतालाई महत्त्वपूर्ण बनाउन सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि डेटा केन्द्रको आन्तरिक आपातकालीन विद्युत आपूर्ति प्रणाली (ईपीएस र ईन्धनको डीजल जनरेटरहरू) छ भने, यो बिजुली आपूर्तिमा अवरोधहरूसँग डराउँदैन। संचार च्यानलहरूको आरक्षण पनि महत्त्वपूर्ण छ। उपकरणको विफलताको स्थितिमा VDS लाई चाँडो पुन: सुरू गर्न यो पनि सम्भव हुनसक्छ।
च्यानल चौडाइ र ट्राफिक सीमा। इन्टरनेट च्यानलमा प्रयोगको सर्तहरू सधैं पारदर्शी छैनन्। धेरै प्रदायकहरूले तपाईंको निश्चित VDS यातायातको लागि ट्राफिकका लागि ब्यान्डविड्थ वा चार्ज सीमित गर्दछ। यस्तो प्रश्नहरू अघि बढाइरहेका छन् ताकि तिनीहरू सर्भरको अपरेसनमा हस्तक्षेप गर्दैनन् वा योजनामा ​​मूल्य पट्टी उठाउन सक्दैन।
गुणस्तर प्राविधिक समर्थन। एक राम्रो तरिकाले स्थापित प्रणाली विफल हुन सक्छ, त्यसैले केवल विश्वसनीयता न केवल महत्त्वपूर्ण छ, तर समस्या निवारण को गति पनि। राम्रो होस्टिंग वा VDS छनौट गर्नको लागि राम्रो तकनीकी सहयोग विचार गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो। तपाईले चयन गरेको प्रदायकको तकनीकी सहयोगको क्षमताको साथ समीक्षाको साथ साथै सहयोगको शुरुवातमा केहि प्रश्नहरू सोधेर तपाईले आफ्नै संचार अनुभवको बारेमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ।
मूल्य निर्धारण नीति। निस्सन्देह, होस्टिंग चयन गर्दा मूल्य सधैं मुख्य कारक मध्ये एक हो। तथापि, यो बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ कि उच्च स्तरको डेटा केन्द्रमा आधुनिक सर्भरमा चलिरहेको VPS होस्टिङ समान विशेषताहरूको साथ बजेट भन्दा धेरै पटक खर्च हुनेछ। मूल्य राम्रो सहयोगले पनि प्रभाव पारेको छ, किनकि यसले योग्य उच्च भुक्तानी प्रशासकहरुलाई कार्य गर्दछ।
डेटा केन्द्रको भौगोलिक स्थान। आज एक होस्टिंग वा अर्को देशमा VDS छनौट गर्न वा कुनै अन्य मुख्य भूमिमा कुनै पनि प्रतिबन्धहरू छैनन्। तर यो राम्रो छ कि तपाईं आफ्नो लक्षित श्रोताहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सर्भर अर्को देशमा अवस्थित छ भने, यसले लोड समयमा निश्चित रूपमा दसौं मिलिसेन्डहरू थप्नेछ।
थप IP ठेगाना भाडामा सम्भावना। कहिलेकाहीँ तपाइँ सर्भरमा एक अतिरिक्त आईपी ठेगाना जोड्न आवश्यक छ। उदाहरणको लागि, यदि तपाईंलाई एक VPS होस्टिङमा धेरै साइटहरूको लागि SSL प्रमाणपत्रहरू स्थापना गर्न आवश्यक छ (पुरानो ब्राउजरले समानता समाधान गर्दछ यदि त्यहाँ धेरै आईपी ठेगानामा एसएसएल एन्क्रिप्शन साइटहरू छन्)। कहिलेकाहीँ यो फरक आईपी ठेगानामा प्रशासन प्यानल, डाटाबेस वा अन्यडोमेनलाई अर्को भाषामा राख्न आवश्यक छ। यसैले, यो निश्चित गर्न को लागी सल्लाहकार छ कि चुन्नुहोस चयनित टैरिफ को अनुरोध मा अतिरिक्त आईपीएस VDS मा जोड दि्छ।
उच्च गति र स्थिर कार्य महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू हुन् जसमा कुनै पनि साइटको सफलता निर्भर गर्दछ, खासकर यदि यो एक व्यावसायिक परियोजना हो। VPS-होस्टिंगले उच्च गति प्रदान गर्दछ, यसको मूल्य एक समर्पित सर्भर भन्दा धेरै कम छ। आज बजारमा धेरै रोचक प्रस्तावहरू छन्, त्यसैले VPS को छनौट सावधानीपूर्वक विचार गरिनु पर्छ, ध्यानपूर्वक सबै कारकहरू वजन।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्यारामिटर RAM को मात्रा हो। यदि तपाईंलाई PHP + MySQL मा एकल साइट चलाउन VDS को आवश्यकता छ भने, राम को मात्रा कम से कम 512 एमबी हुनु पर्छ। यो औसत उपस्थितिको साइटको लागि पर्याप्त छ, र कुनैपनि अवस्थामा सामान्यतया साझेदारी गरिएको होस्टिंगबाट स्विच गर्दा तपाईंले गतिमा वृद्धि महसुस गर्नुहुनेछ। प्रयोग गरिएका ड्राइवहरूको प्रकार पनि महत्त्वपूर्ण छ। HDD ड्राइभ पहिल्यै अप्रचलित छन्, त्यसैले तपाई SSD सँग VPS छनौट गर्नुपर्छ। यस्तो सर्भरमा, डिस्क उपप्रणालीको साथ कामको गति दसौं र सयौं उच्च छ, जसले महत्त्वपूर्ण रूपमा समग्र गतिलाई असर गर्छ।
उपयुक्त क्षमताको एक भर्चुअल सर्भर भाडामा र एकै समयमा अति अति भुक्तानी गर्न, तपाईंले अग्रिमका आवश्यकताहरू निश्चित गर्नुपर्दछ। अधिक प्रदायकहरूले सेवामा VDS को प्रदर्शन बढाउन अनुमति दिन्छन्, मेमोरी, प्रोसेसर कोर वा डिस्क स्पेस थप्दा। तर तुरुन्तै कन्फिगरेसन कन्फिगरेसन गणना गर्दै, यो सबैभन्दा उपयुक्त टरिफ छनौट गर्न सजिलो हुनेछ।
हामी सबै भन्दा विश्वसनीय र छिटो VPS सर्भर प्रदान गर्दै Adminvps VPS होस्टिंगको सिफारिस गर्छौं।
मुद्रकहरू र स्क्यानरहरू
https://termotools.com ne.termotools.com © नेटवर्क र इन्टरनेट 2019